Kuvhiya Cap Fekitori | Wholesale Kuvhiya Cap Vagadziri uye Vatengesi
Usazviomesera kwakavharwa nenyama Chiremba Kunopindirana Musoro Disposable p
Iyo yebhuruu yezvokurapa misoro yakagadzirwa ne pe + pe, uye kune tambo inogadziriswa kuseri kwechigadzirwa, iyo inogona kugadziriswa zvinoenderana neakasiyana maumbirwo emusoro. Chigadzirwa chinofema uye chakasununguka, chakakodzera kushandiswa muzvipatara, makiriniki uye dzimwe nzvimbo
Disposable kuvhiya chivharo antistatic cleanroom basa ngowani pateni yemahara
Iyi chena inoraswa yekuvhiya cap inogadzirwa ne polyester zvinhu, ine yakanaka mvura kuramba uye inogona kunyatso chengetedza musoro wechiremba. Iyo bhanhire rakasununguka rinogona kukodzera zvirinani musoro wedenderedzwa wemarudzi ese evanhu. Inokodzera zvipatara nemakiriniki. , Hutano nzvimbo, nezvimwe.
Fekitori Yakananga Kutengesa Isina kurukwa yebhuruu Civil Inoraswa Cap
Inoraswa ngowani yakagadzirwa neisina-kurukwa machira, inofema uye yakasununguka zvinhu, pamwe chete neyakagadziriswa elastic design, inogona kukodzera kune vakawanda vanhu chimiro chimiro, chigadzirwa hachina guruva uye chinofema, uye chinogona kushandiswa kune akawanda maficha, senge mafekitori nemashopu, Warehouse, kufamba, nezvimwe.